Xildhibaan Mustaf Dhuxulow Oo Ka Digay Caddaalad Darro Dhallinyaradda Ku Kalifta Raacidda Fikirka Xagjirka Ah – Kalfadhi
Xildhibaan Mustaf Shiikh Cali Dhuxulow ayaa sheegay in dhallinyarada Soomaalieed u baahanyihiin caddaalad iyo shaqo loo siman yahay “Marka ay caddaalad darro jirto waxa ay dhiiri galinaysaa fikirka xag jirka ah, qofkuna waxa uu dareemayaa in uu ka tago dowladnimadda oo uu caddaaladda ka raadiyo Al-shabaab, ama uu ku aarsado” ayuu tiri xildhibaan Mustaf Dhuxulow.
Xildhibaan Mustaf ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in ay dhallinyardda ka qayb galiso talada dalka gaar ahaan xilalka siyaasadda “waa in dhallinyarada lagu dhiirragaliyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda ama talo dalka wax laga siiyo” ayuu yiri Dhuxulow waxa uuna ka digay in ay isku arkaan in fikirka iyo siyaasadda lagu matalo.
Xildhibaan Mustaf Shiikh Cali Dhuxulow ayaa dhinaca kale ka digay madax banaannidda Khudbadda Salaadda Jimcaha ee Masaajidda oo laga yaabo in wadadada qaar ay ku iclaamiyaan Jihaad “waxaad arkaysaa in jimcooyinka qaar wadaad khudbadda ku iclaamiyo Jihaad” ayuu yiri xildhibaan Mustaf Shiikh Cali Dhuxulow.
Xildhibaan Mustaf Shiikh Cali Dhuxulow oo la hadlayay culimadda Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay iska-warqab “Waa in culimadu iska war qabaan oo ay Salaadda jimcaha kaddib khudbadda uga hadlaan nabadda waayo diinta Islaamka waa diin nabadeed ayuu hadal kiisa sii raaciyay xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo dhallinyaro badan kula hadlayay meel fagaara ah.
Odawaa:Cadaado Waxaan U Imid Inaan Ka Shaqeeyo Midnimada Galmudug